Ngaba ufumana ingcebiso embi kubathengisi abakhokelayo? | Martech Zone
Ngaba Ufumana Ingcebiso Embi Kubathengisi Abaphambili?
NgoMvulo, Meyi 1, 2017 NgoMvulo, Meyi 1, 2017 Douglas Karr
Mhlawumbi kudala ndikumdlalo wentengiso. Kubonakala ngathi ixesha elininzi endilichitha kolu shishino, bambalwa abantu endibahloniphayo okanye ndibamameleyo. Oko akutsho ukuba andinabo abo bantu ndibahloniphayo, kungenxa yokuba ndiyadana ngenxa yabaninzi ababambe ukukhanya.
Balumkeleni abaprofeti ababuxoki, abeza kuni ngezambatho zeegusha, ngaphakathi ke beziingcuka eziqwengayo. Matt. 7: 15
Kukho izizathu ezimbalwa…
Ukuthetha okuGqwesileyo kunye nokuThengisa okuKhulu ziTalente eziKhethekileyo
Ndiyakuthanda ukuthetha esidlangalaleni kwaye ndizama ukuphuma amaxesha ambalwa ngenyanga ukuze ndithethe. Ndibiza umrhumo wokuthetha ngokufihla ixesha lam lokungabikho emsebenzini, kodwa akukho nto ihlekisayo. Kule minyaka, ndibeke ixesha elininzi kulo msebenzi wobugcisa kwaye ndizama ukuyibetha ngaphandle kwepaki ngalo lonke ixesha ndingena phambi kwabantu.
Into enomdla kukuba, ngelixa ndizithengisa ngamathuba okuthetha esidlangalaleni, ezona zakhono zam zokuthetha azinanto yakwenza nezakhono zam zokuthengisa. Ukuba sisithethi esidlangalaleni akukwenzi ukuba ube ngumthengisi omkhulu. Ukuba ngumthengisi omkhulu akukwenzi ube sisithethi esidlangalaleni (nangona kunokufumana amathuba amaninzi okuthetha).
Ngelishwa, ndinabaxhasi abaliqela abaqeshe kakhulu izithethi ukunceda kwintengiso yabo-emva koko baphoxeka kakhulu ziziphumo. Ngoba? Ewe, kuba isithethi esidlangalaleni siyathengisa ukuthetha kwabo, sihamba lonke ilizwe (okanye iglobe), kwaye yonke into abayenzayo yenzelwe ukufumana iintetho ezingakumbi. Iintetho zihlawula amatyala abo, hayi ukuthengisa abathengi.
Iintetho zezona zihlawula amatyala abo, hayi ukuthengisa abathengi. Kuquka izilumkiso ezothusayo, ukufumana isilivere, okanye ukusebenzisa iithiyori ezingafundiswanga kuthengisa ithuba elilandelayo lokuthetha- kodwa kunokuqhuba ukuthengisa kwakho emhlabeni.
Ukubhala malunga nokuThengisa akuthethi ukuba uyiMarket
Andikwazi ukulinda ukuba ndiqhekeze incwadi elandelayo yentengiso ephumayo. Ixesha elizolileyo elichithwe kwincwadi enkulu yentengiso yandisa umbono wam kunye nenkqubo yokucinga. Ndihlala ndizifumana ndisiya kwimibono yabathengi nakwezinye iingcinga ngelixa ndifunda, ndibuyela umva ukubona into endiyiphosileyo kunye nokubhala amanqaku kwiphedi ecaleni kwesihlalo sam sokufunda.
Oko kwathethi, incwadi yentengiso ihlala ibubungqina obungaqinisekiswanga ngumlobi… kakuhle… ukuthengisa iincwadi. Ngokuqinisekileyo, usithi ungumbhali uvula iingcango zentengiso, zokubonisana, kunye namathuba okuthetha. Kwaye, njengombhali ngokwam, ndiyakuqinisekisa ukuba ukuba ngumrhwebi omkhulu kuya kunceda ekuthengiseni iincwadi. Nangona kunjalo, kusengokuthengisa iincwadi kwaye kunganyanzelekanga ukuba wenze intengiso enkulu.
Zininzi izinto okwahlukileyo kuzo, ewe! Abathengisi abaninzi bathanda ukubhala nokwabelana ngeziphumo zabo ezincwadini.
Abathengisi abakhokelayo banokungazikhathaleli iinkampani ezinjengezakho
Ndinabathengi abakholelekileyo kule minyaka ibandakanya i-Salesforce, i-GoDaddy, iWebtrends, i-Chase, kunye-ngoku kutsha nje-uDell. Ndiyakuqinisekisa ngokuqinisekileyo ukuba imiceli mngeni le mibutho mikhulu inayo yahluke kakhulu kumashishini amancinci naphakathi esisebenza nawo. Ngelixa inkampani enkulu inokuthatha inyanga ukuya
Ishishini elikhulu linokuthatha iinyanga ukumisela ilizwi kunye neethoni yamanyathelo okuqala, ukulungelelanisa izixhobo zangaphakathi, kunye nokuhamba ngomthetho okanye ezinye iinkqubo zokuvunywa. Ukuba besisebenza kweso santya kunye nokukhawuleza ngokuqalisa kwethu, ngekhe baphume kwishishini. Zininzi kakhulu iinkampani esisebenze nazo ezilahle uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu kwiinkokeli ezikule ndawo yethu kodwa zaphoxeka ziziphumo.
Ungayifumana njani iMarker efanelekileyo onokuyithemba
Andikho, nangayiphi na indlela, ndikhomba kwizithethi, ababhali, kunye nabathengisi abakhokelayo kwaye besithi abanikezeli ngabaphulaphuli babo, abafundi, okanye abathengi naliphi na ixabiso. Ndiqinisekile ukuba bayayenza… kungenxa yokuba abanakho ukubonelela nina ixabiso. Amashishini awafani kwaye nganye nganye ihamba ngendlela yayo uhambo lokuthengisa..
Ukubeka iinjongo, izixhobo, kunye namaxesha afumanekayo kwinkampani yakho kwaye ufune abathengisi abasebenze kwimizi-mveliso efanayo okanye neenkampani ezinomceli mngeni ofanayo. Unokumangaliswa kukuba eyona asethi inkulu kwimizamo yakho yokuthengisa isenokungabalulekanga kwinkomfa elandelayo, ukuthengisa incwadi elandelayo, okanye inkwenkwezi kwimidiya yoluntu.
Ngendlela… njengombhali, isithethi, kunye nentengiso… andizikhuphi ngaphandle kweli nqaku. Andinakulunga ngokufanelekileyo kwinkampani yakho, nokuba!
tags: Authorsukufumana umthengisiindlela yokufumana umthengisiIincwadi zentengisouhambo lokuthengisaNdithathathembaumbhalo